7 imithetho yomtshato ngaphandle komtshato
Ininzi yamantombazana ikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba injongo yabo ekugqibeleni kukutshata. Kodwa ngokuqinisekileyo ukuxubusha entloko yakho, baya kuqonda ukuba abazange balwela kakhulu isitampu kwiipassports zabo njengobomi obude kunye obonwabileyo emtshatweni. Kodwa ngubani owathi "ngaphesheya" kuya kuba lula kunokuba ukhululeke kwimibandela yomtshato? Kodwa umtyholi akayikrele kakhulu njengoko evezwe. Kukho imigaqo emininzi, ukujonga oko unokugcina nokuqinisa ubuhlobo bakho nomyeni wakho. Masibhale phantsi kwezi zihlandlo ezisixhenxe.
Iingcamango malunga nezigaba zothando
Uyakhumbula ukuba amadolo akho aguqulwe ngaphambi komhla ngamnye, luhlobo luni lomlilo owavutha isondo esingalindelekanga nolulindele ixesha elide, njengokuba ungathanda ukungahambi kumlingane ngomzuzu, kodwa ukuba ubambe isandla sakhe ngekota? Ewe, ewe, ukukhawuleza kwangaphambili okanye ukukhawuleza kwazo zonke ezi mphulo ziphela, kodwa kungekhona ngenxa yokuba uthando luye lwadlula kwaye aluzange lube ngaphantsi, uvele nje ekupheleni kwesigaba sokuqala. Lo kwakuyinxalenye "yesifo".
Isigaba esilandelayo, esinye sesigqibo esithile kwisithuba sexesha elizayo lobudlelwane bakho - esi sisigaba sokusasaza. Amadoda athatyathele kancane, abuyisele ubudlelwane babo bokuqala kunye nabahlobo okanye ukulandela ukuzonwabisa kwabo. Kubalulekile ukuqaphela ukuba wayenobomi bakhe phambi kwakho, nje ngokuba abahlobo bakho babe nawe. Kwaye akadingeki ukuba aphephe ubomi bakhe bonke, kuba awuyi kuba nako ukutshintshwa ngokupheleleyo kwenkampani yenkwenkwezi (nangona ufunda konke ngebhola). I-Leash, esele iphosa emqaleni, akufanele ibe mfutshane - ngoko awuyi kufeza nantoni na. Abasetyhini, ngokwenene, benza into efanayo, kuphela ngezinye iindlela - baqala ukuxabana nomntwana osemtsha okanye bamxoshe emzimbeni, ophika ulwabelana ngesondo.
Emva koko uqala imfazwe yangempela yamandla kwintsapho (kwaye ngokukhawuleza, ukusekwa kwemithetho nemida). Uphawu oluphambili kwesi sigaba ngumnqweno wobabini iqabane lokuzimela kunye nokwakhiwa kwesithuba somntu. Ngelishwa, ngeli nqanaba, ezinye izibini ziza kwisigqibo sokuba lixesha lokugqiba ubudlelwane. Abanye bahlala kunye, kodwa abayikushiya ingcamango yokuba nganoma yimuphi umzuzu ukulungele ukuphula le mibophelo, lo mzuzwana awukwazi ukuza, kodwa uhlala ngokuqalisa , eqokelelwa ngokucophelela ngumbonononkqo, ayinakuyivuyisa. Okwesithathu bacinga ngokuthandana kunye nomntu othandekayo njengoluphikisanayo, ngubani omele aphumelele, ebonakalise igunya lakhe aze aqinise ukulawula kwakhe.
Ubudlelwane kunye nomgama, ukuxhomekeka kunye nokuzimela, ukuthandana kunye nokwesaba, amathuba okungcatsha kunye neemvakalelo ezihambelana nayo: umona kunye nehlazo - zonke ezi zigaba zihambelana nomjikelezo wendalo. Kungakhathaliseki ukuba sahluke njani, njengomthetho, zonke iintsebenzo zihamba ngendlela ehleliweyo. Kwaye kukho nxalenye yalezi zigaba kuyimfuneko ukuba amaqabane afikelele kumgangatho olandelayo wobudlelwane.
Into enokuyenza: ingxaki kukuba wonke umntu - ungesabi ukumemeza nokuphikisana. Iimvakalelo, ngokwexabiso elifanelekileyo, zilungile. Into ephambili, khumbula ukuba ukukhala kungumzamo wokuva, kodwa akukho ndlela yokubonisa imbono engalunganga malunga neqabane. Ungayisebenzisi isigama esisigxina, zama ukwenza ngaphandle kwe-mutualobeds kwaye ungalindeli ukuthi "awuyithandi, ekubeni uziphathe," ungasongeli ukuhamba kwaye unganiki ukuhamba. Oko kuthethwa ezintliziyweni, kunokuza kukuchasa. Impikiswano neengxabano - oku kuqhelekileyo! Spore kwimpilo.
Umfazi, yena kunye nomfazi waseAfrika
Ekuqaleni kobudlelwane, bobabini indoda kunye nelo bhinqa ziqhakazile, kuba zivakalelwa kukuba zifunwa kwaye ziyathandwa. Oku akumangalisi, kuba ukuthetha kunye nesiqingatha sesibini, bafumana ukunconywa, njengesiqiniseko sobufazi babo okanye besilisa. Kwaye ukukhangela kwakho kukhangelelwe kungekhona nje kuphela ngumlingani, kodwa kunye nabazungezile, ngoko ukuzithemba kukukhula kwimimandla kunye nemida. Kodwa ukunyamezela okuthandwayo kwintanda ethandekayo kuya kuba ngaphantsi koko, ukunyanzelana ngokuya ngokunciphisa - ekugqibeleni, kuya ekuzihloneleni. Ngeli nqanaba, amantombazana kufuneka abe namandla. Musa ukuzicenga ngenxa yokuncoma. Khumbula ukuba ukuqaphela ukukhanga kwakho kufanele kulungele, kungekudala.
Yintoni ongayenza: ungashiyi isibheno sakho ngesondo kunye nomtsalane kuphela kwintanda. Zibophezele ukuba usebenzise uhlobo olunike lona. Akukho mntu onokunyathela kwisithembu sengqondo, kodwa ukunyaniseka (ukugxininisa kwigama elithi "lula"), ukukhwaza amehlo, ukugqoka okugxininisa ubulili bakho, kufuneka ukuba ubekho ebomini bakho. Ukuphuma kubantu, bonise ukuba usasemdlalweni, kodwa ngelixa elinye iqela lakho sele linomlingane. Mkhumbuze umthandi wakho ukuba usengumfazi, nokuba uhlala kuyo, kodwa ufana nabanye abantu. Into ephambili ayiyikuyidlula.
Sibeka phambili: kuqala, "mna", ngoko "thina"
Ukuba ucinga wena ngokwesiqingatha sazo zonke, esibizwa ngokuba "Siye", ngoko ke kule nxulumano, inxalenye ixhomekeke kuyo. Xa uvakalelwa kukuba awunalo ubomi ngaphandle komlingane wakho, ngakumbi unomona, unesiqingatha sakho sesibini sinamandla ngakumbi ukuba unamathele ngeentambo ezinamandla kwaye ufuna ukuphuma ekhaya "entolongweni" (ngamanye amaxesha onke amaphupha awaphelelanga). Yonke into ingaba yinkangala ngokuchasene nayo - iqabane lakho ngaphandle kokuba ungeke uthabathe inyathelo, ukuze uhlale unomuvo wokuba unomvuzo omfutshane.
Into enokuyenza: akukho nto embi kwi-equation "Ndiye" + "Ndiye" = "Siye". Oku kuhambelana kuphela nomfanekiso wesibalo kumzekelo wakho ukususela kwiimvume zeendawo, imigudu ingatshintsha, kwaye ibe ngcono. Ndikholelwe, inqaku elithi "yonke into imele inqunywe ngumntu" ayikwazi ukuthathwa ngendlela enjalo, njengegama elithi "Ndiya kusebenzisana nayo yonke into." "Senza ingqiqo kuphela xa kubini abantu ababini, kungekho enye ebonisa imbono, kunye nomnye ovumelana naye.
Kuyamangalisa ukuba wena kunye nomlingane wakho wakha ubudlelwane babo ukuze bangabi ngabathandi kuphela kodwa nabahlobo, kodwa ngexesha elifanelekileyo kubalulekile ukunqumla "thina" kwaye sithole inkxaso kwicala, kunjalo, isicwangciso sakho soqhagamshelwano .
Umyeni wakho akayiyo ingqondo
Kukho isimo sengqondo somfazi "Ukuba uyandithanda, uyazi kakuhle kakuhle ukuba ndiyicinge into endiyidingayo." Kuyaziwa apho iinyawo zale binzana zivela khona, kwaye zivela phi "zonke i-vanilla" zivela kwi-comedies zothando. Masantombazana, khumbula, abatshatileyo abanalo ubuchule bokufunda, akwazi ukufunda iingqondo, kodwa kunzima ukukuqonda, ngamanye amaxesha nakwezinye izinto, akufani namadoda akho. Eyona nto ibaluleke kakhulu ingxaki yokungaqondakali kwimpilo yobundlobongela. Xa, ukwesaba ukukhubekisa umfazi womntu akuthi into eyenziwa yinto engenziyo. Ngenxa yokunyamezela ngesigulane, ngenxa yoko, abafazi baqala "ukulimaza intloko", kwaye amadoda "athathele emsebenzini". Ngenxa yoko, inxalenye esondeleyo yolwalamano iyonakaliswa.
Into enokuyenza: kulula ukuthetha apha. Kodwa ukuba ungathethi nto ongayithandiyo, kodwa malunga nento oyithandayo. Nika okukhethwa kukho, phu laphula oko umlingane wakho athi. Ngokukhawuleza ukuba omnye wakho uqale ukuvula kwaye yesibini iya kuxhasa inkxaso yomkhosi. Kutheni sifanele siqale kuqala? Akukho mzekelo ungayiphenduli le ngxoxo kwisitatimende samabango, makenzeke ngefomathi ye "I-Complaint Book", kodwa ngesitayela se "Iingcebiso kunye nezifiso".
Faka i-rake kwikona
Emva kokuhlaziya zonke iimpikiswano nomyeni wakho, uya kubona ukuba bonke bahlakulela ngokufanayo. Xa i-scandal couple, iifom yeendlela ezifanayo zifana. Njengomthetho, kuphela imbangela yokuguqulwa kweengxabano. Ngokuqhelekileyo, ukuqala, umzekelo, nezitya ezingatshintshiweyo, kwikhosi iindlela ezingavumelekanga, ezifana: "Uyakhumbula ihlobo lasehlobo ...". Uqala ukuluhlula ezo zono zomhlobo wakho, oye waba yimbangela yokuxabana, kwaye kwakubonakala ngathi le ngxaki sele isisombulule, kodwa akukho, ubuye wabuyela kuyo. Akukho mntu unokuthi "unqabile" igama, njengomthandayo, kunye nonke ngenxa yokuba uyakwazi ukubetha. Ukuphuhliswa kwengxabano enjalo kubonakala kwangaphambili - "siqhubhisa", kwaye sizithukuthelele ngokuzivumela ukuba sisabele xa sicaphukisa.
Into enokuyenza: ngokubanzi, ukuxabana kuyisizathu sokukhawulela umlingane, indlela yokufeza uthando lwakhe. Kule meko, kufuneka uphenduke kwifilosofi yasempumalanga, ethi intshatsheli eyona nto ayizange iqale. Khumbula ukuba ngexesha lempikiswano umntu oqinileyo akayena ozwakalayo, kodwa lowo okwazi ukuhlala ezolile. Ukunciphisa inguqu eqhelekileyo yokukhutshwa kweziganeko-musa ukuhlaselwa. Ungazami ukubonakalisa ukufaneleka kwakho ngexesha elithe latsho kancinci, kuba ilizwi lakho lilahlekile ngokukhutshulwa. Mamela oko umntu wakho afuna ukukuxelela, ngoko ukumphoqa ukuba akuphulaphule.
Iingcamango kude, vula iimvakalelo
Yeha ku-Wit. Sivame ukuhlalutya yonke into size sicinge ngayo ngamanye amagama - ukuzitshintsha. Oku kulungile, kodwa kuphela xa umcimbi uya ebomini bomntu. Ngakolunye uhlangothi, akukho nto iphosakeleyo ngento yokuba ebomini bakho zonke iinkalo zihlelwe kakuhle kwaye zifakwe kwiithalafu, kodwa kwelinye, ukulibala ukutshintsha kwimoya yentsingiselo, ngexesha lobudlelwane nawe uba njengomatshini.
Into enokuyenza: Ukucinga okunengqiqo kunokuphelisa ngokupheleleyo ukuthanda ubudlelwane, ngoko ngamanye amaxesha, xa izigqibo ezichanekileyo zishukumisela kwisisombululo esithile, yeka. Ukuphefumla obunzulu, vumela iingcinga zakho zikhululeke, vumela ingqondo ikhulule. Kwaye ke khawucinge kwakhona, kuphela ngomnye umzimba-intliziyo. Ukuba "uthando" lwakho, "uxabiso", "uqonde" lungawela zonke iingqinisiso zengqiqo, kwaye ke oku kuyona kuphela isigqibo esifanelekileyo.
Oku kukhetha kwakho kwaye uya kuhlala nayo
Ngamanye amaxesha, ngethuba leentsapho, ukhangele iqabane lakho kwaye ucinge: "Yaye ndiyaphi na amehlo xa ndawukhetha." Lo mzuzwana xa zonke izinto ezintle kunye ezimnandi ezibuhlobo bakho ziyaqhuma. Ngamaxesha amaninzi, abahlobo baqala ukufaka umlilo kumlilo, ukuphindaphinda ilizwi elinye "ngelixa sathi."
Oko ukwenza: ukuhlala ngengqondo "ngexesha lomshini" kwaye ubuyele ngexesha oye waya ezindlebeni zakho ngothando nalo mntu udlala ngokuhlekisayo xa elala nawe embhedeni. Khumbulani, kunokuba yena waxoshwa. Gcina lo mva uze ubuyele nayo ngoku!
Izinyathelo ezili-10 zokuzonwabisa
Yintoni endimele ndiyinike wam intanda ngenxa yokuzalwa kwam?
Ukuba umntu udala kakhulu, ngaba kukho ukumahluko?
Ngaba kunokwenzeka ukuba ulondoloze uthando: kwintlekele ngeyona nto inzulu
Iimodeli zezicathulo zabasetyhini
I-Aspen: iimpawu zonyango kunye neenzuzo zebhakeni le-aspen
Ukuhlaselwa kweDumpkin Dish
Ukususela ebuhleni ukuya kwikhenyane elibi: ukuguqulwa kwe-movie yama-actress
Isibikezelo seenkwenkwezi ze-Aquarius ngo-2010
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwimihla ngemihla
I-Lenten ikhefu elifutshane